Ukhale ngamambawu 'oklinye wabulala unina' - Ilanga News
Home Izindaba Ukhale ngamambawu ‘oklinye wabulala unina’
Kudamuke inkungu esembona engavuki
AMAKHOSIKAZI abeyokhalisa umndeni wakwaNene abehleli emakhandleleni. IZITHOMBE: ZITHUNYELWE
UKHALE ngokweqiwa ngamanzi amponjwana owesilisa oneminyaka ewu-27 wasoFafa, eXobho, oshiye umphakathi wangakubo ungawuvali umlomo ngakwenze kunina okuthiwa umklinye waze wafa entathakusa yangeSonto, kwaze kwadamuka inkungu emehlweni ngoba esembona engavuki sekuphakeme nelanga.
UMnu Bonginkosi Nene ongahlobene nomufi oyinduna yesizwe saseNkumandeni, utshele ILANGA ukuthi ubikelwe ngamalungu omphakathi ngokufa kukaNkk Balekile Zimofi Nene (64), nebala wanikela khona ngokushesha.
“Ngifike kunequlu labantu ebelisho ukuyidla luhlaza indodana kamufi ebibhocobele, kubonakala ukuthi yethukile.
“Ngisondele kuyena umfana ngifuna angichazele ukuthi kwenzekeni kunina abehlala naye njengoba esicabheni sasendlini okutholwe kuyona isidumbu bekunembobo ebivuliwe.
“Ungitshele ukuthi noma engakhumbuli kahle njengoba ebedakiwe, kodwa kunesithombe esincane esibuyayo sokuthi nguyena obulale unina. Umfana ugonyuluke nasemaphoyiseni ngesikhathi kubhalwa isitatimende, wavuma ukuthi nguyena obulele unina.
Ucele uxolo emalungwini omphakathi, ethi abekwenza akakwazi ngoba ubedakiwe. Silinde ukubona imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu njengoba abakwazile ukusondela kusona, basola sengathi umufi udlwenguliwe ngendlela abelele ngayo,” kusho uMnu Nene.
UNkk Nonceba Mngwengwe, obekhulumela umndeni, utshele ILANGA ukuthi kubethusile ukufika emzini kamufi bebona isicabha sasendlini alala kuyona sicandiwe emuva kokuba umfana ehlabe umkhosi ngonina ongavuki kuyona leyo ndlu.
“Siyabonga ngoba umfana uzivumele ngowakhe ukuthi umbulele unina ngokumklinya noma engasho ukuthi bekubangwani, ngaphandle kokuthi ubeqiwe wutshwala. Kube kuhle ukuvuma kwakhe ngoba ukwenze engaphoqiwe futhi engashaywa muntu,” kusho uNkk Mngwengwe.
Ikhansela ku-ward-3 kuMasipala waseBuhlebezwe iFafa engaphansi kwawo uMnu Mfukuleni Ndlovu, lithe lesi sehlakalo sibavule amehlo ngokubiza imbizo yentsha ukuba iyofundiswa ngokuphilisana kahle nabantu abadala.
“Siyindawo yasemakhaya esadla ngoludala futhi besingazitsheli ukuthi lezi zigameko zingahamba zize zifike endaweni yethu.
“Iyaqala ngqa emlandweni le nto lapha oFafa kodwa sizokwenza ngawo wonke amandla ukuyigwema ukuba ingaphinde isehlele. Kubuhlungu ngoba kuvela ukuthi umufi ubulewe yindodana yakhe eyavundla okhalweni lwakhe. Siyathemba ukuthi umthetho uzoba wumlomo womphakathi ukukhuza la manyala,” kusho uMnu Ndlovu.
UCapt Nqobile Gwala okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uthe amaphoyisa aseXobho abophe owesilisa ongumsolwa oneminyaka ewu-27 ubudala ngecala lokubulala.
Ubevele ngoLwesibili eNkantolo yeMantshi yaseXobho.
Previous articleIPirates ibambe ufishi omkhulu
Next articleUzoshukumisa inkundla ‘ewuhlanya’ kwiMbewu